Vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) - Hello Sayarwon
Dr. Pyae Phyo Maung မှ ရေးသားသည်။ 15/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) ကဘာလဲ။
ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း ဆိုတာဟာ အမှတ်မထင်မူးမိုက်လဲကျသွားတာကိုဆိုလိုပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ်က အာရုံအချို့ကို အလွန်အမင်းတုန့်ပြန်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ – သွေးမြင်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရခြင်း။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို တနည်းအားဖြင့် neurocardiogenic syncope လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများဟာ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကို ရုတ်တရက်ကျဆင်းစေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ဦးနှောက်ကို သွေးရောက်ရှိမှု ကျဆင်းသွားလို့ဖြစ်ပြီး သင့်ကို ခေတ္တမျှသတိလစ်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်းဟာ များသောအားဖြင့် အန္တရာယ်မဖြစ်တတ် ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ မူးပြီးလဲကျသွားတဲ့အခိုက်မှာတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က မူးမိုက်လဲကျတာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့အကြောင်းအရင်းမရှိဖူးဆိုတာကို သေချာအောင်စစ်ဆေးဖို့ အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
Vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း ဟာ အလွန်တွေ့ရများပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လိုဏ်ခေါင်းပုံစံ အမြင်အာရုံ (tunnel vision) – သင့်ရဲ့ အရှေ့တည့်တည့်ကိုမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကျဉ်းမြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။
မူးလဲကျသူရဲ့ အနီးအနားမှာရှိသူဟာ အောက်ပါတို့ကို သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
မူးလဲကျပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သတိပြန်ရလာခြင်း
သို့သော်လည်း သင်ဟာ မူးလဲကျပြီး ချက်ချင်းမတ်တပ်ပြန်ရပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရင်တော့ ၁၅ မိနစ်ကနေ မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာ သင်ဟာ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ မူးလဲကျနိုင်ပါတယ်။
Vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မူးမိုက်လဲကျရတဲ့ အကြောင်းအရင်း များစွာရှိပါတယ်။
အချိန်အတော်ကြာအောင် အနေအထားမပြောင်းပဲ မတ်တပ်ရပ်နေခြင်း
သွေးမြင်ခြင်း (သို့) ဆေးထိုးသည်ကို မြင်ခြင်း
သင်ဟာ ဝမ်းလျှောခြင်း(သို့) အော့အန်ခြင်း၊ အအေးမိတုပ်ကွေး စသည်တို့ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ယခုလို လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ ပိုမိုနီးစပ်တာကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သင်ဟာနေမကောင်းဖူးဆိုရင် သင့်မှာ ရေဓါတ်ပြည့်ဝနေအောင် လုံလောက်တဲ့အရည်ပမာဏကို သောက်သုံးပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း (vasovagal syncope) ကို အတည်ပြုတဲ့နေရာမှာ မူးလဲကျခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အခြားသော အကြောင်းအရင်းများကို ပယ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
Electrocardiogram – ECG (နှလုံးကထုတ်လွှတ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို မှတ်သားပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းစည်းချက်တွေနဲ့ အခြားနှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အနည်းဆုံးတစ်ရက် (သို့) တစ်လတန်သည်အထိ သယ်ပြုလွယ်သည့် အဆိုပါနှလုံးစမ်းသပ်တိုင်းတာမှု (portable monitor)ကို ပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
Echocardiogram မူးလဲကျခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြသနာ အစရှိတဲ့ နှလုံးအခြေအနေကို သိရှိနိုင်သည့် အသံလှိုင်းပုံရိပ်ဖမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု အပြီးမှာရှိတဲ့ နှလုံးခုန်စည်းချက်ကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သင့်ကို လမ်းလျှောက်စက်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်(သို့)ရွရွပြေးစေပြီး စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မူးလဲကျခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းရှိမရှိကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ မူးလဲကျခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ နှလုံးရောဂါအခံမရှိဖူးဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်က ခန္ဓါကိုယ်စုံလည်လှည့်စစ်ဆေးမှု (Tilt table test) ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ စားပွဲကဲ့သို့ အရာပေါ်မှာ လဲလျောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစားပွဲဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို (လှဲအိပ်ရာမှ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားသို့) ရှုထောင့်မျိုးစုံပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က ခန္ဓါကိုယ်အနေအထားပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာ သက်ရောက်တဲ့ သင့်ရဲ့ နှလုံးခုန်စည်းချက်၊ သွေးပေါင်ချိန် စသည်တို့ကို တိုင်းတာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
vasovagal syncope (ရုတ်တရက်မူးလဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
များသောအားဖြင့် ရုတ်တရက်မူးလဲတတ်သူတွေဟာ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန်က သင်မူးလဲရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေပေးမှာဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ ထိုအရာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ရုတ်တရက်မူးလဲတတ်ခြင်းဟာ သင့်ဘဝကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ထိခိုက်လောက်အောင် ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်က အောက်ပါဆေးကုသမှုတစ်ခုခုကို ခံယူဖို့ အကြံပြုလာနိုင်ပါတယ်။
Fludrocortisone acetate လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးပေါင်(အလွန်)ကျသူတွေမှာပေးတတ်တဲ့ ဆေးဟာ ရုတ်တရက်မူးလဲတတ်တဲ့ အခြေအနေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Selective serotonin inhibitors (SSRI) အုပ်စုဝင် ဆေးများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခြေထောက်ပိုင်းမှာပဲ သွေးတွေစုပုံမနေအောင် ပြုလုပ်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်က အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ အသားကပ်ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်တာတွေ (သို့) မတ်တပ်ရပ်နေစဉ် ခြေထောက်ကြွက်သားတွေကို တင်းပေးတဲ့အလေ့အကျင့်တွေ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ သွေးတိုးတတ်တဲ့ အလေ့အထမရှိဖူးဆိုရင်
သင်စားတဲ့ အစားအစာထဲမှာ အိမ်သုံးဆားပိုမိုထည့်ပေးဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်တာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ပူအိုက်ပြီး လူထူထပ်တဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာပါ။ ပြီးတော့ ရေများများသောက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
အခြားသောကုသမှုတွေက ရုတ်တရက်မူးလဲတတ်တဲ့အခြေအနေကို မသက်သာစေဖူးဆိုရင်တော့ (အလွန်ရှားရှားပါးပါးအနေနဲ့ ) နှလုံးစက်(electrical pacemaker) ထည့်ခြင်းဖြင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းများက ရုတ်တရက်မူးလဲတတ်ခြင်းကို ကုသရာမှာ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ အမြဲတမ်းတော့ ရုတ်တရက်မူးလဲတာကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် မူးလဲကျတော့မယ်လို့ ထင်တဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်ကို လှဲချလိုက်ပြီး ခြေထောက်တွေကို အပေါ်ကို မြှောက်ထားပေးပါ။
ဦးနှောက်ကို သွေးစီးဆင်းမှု ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ လှဲအိပ်ဖို့ အဆင်မပြေဖူးဆိုရင် စောင့်ကြောင့်ထိုင်ချပြီး သင့်ဦးခေါင်းကို ဒူးနှစ်ဖက်ကြားမှာထားကာ သင်သက်သာလာသည်အထိ နေရမှာဖြစ်ပ။ါတယ
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/home/ovc-20184773. Accessed August 3, 2017.
Vasovagal syncope (common faints).
http://www.rbht.nhs.uk/patients/condition/vasovagal-syncope/. Accessed August 3, 2017.
https://www.healthcentral.com/encyclopedia/v/vasovagal-syncope. Accessed August 3, 2017.